Murna abbaa garaa Lichoo Bukraa jaaree! – Welcome to bilisummaa
Murna abbaa garaa Lichoo Bukraa jaaree!
bilisummaa September 26, 2013	Leave a comment
Oromummaa fi Afaan Oromoo
Dhiiga obbaleeysaa birriidhaan gurguree!
Kan foon sabaa nyaatu fakkaataa adurree!
Dottaawaa akka harree!
Ajaawaan akka moorree!
Diina ilmaan ayyaa mallasaa ziyaaree!
Qabsoo walabummaa hurree itti maree!
Dantaa sabaa borcee arraataan waqaree!
Gantummaa dhaadheeysee olii gad finxiree!
Arraata tolfatee aduu gama waaree!
Galma utubaa hinqabne kan keeysi buburree!
Kan galgala diigu ganama ajjeeree!
Maqaa tokkummaatiin kijiba dhandhaaree!
Dandii walabummaa dura jaaree qoree!
Saba burjaajeeysuuf wallaalchisee xurree!
Qabsaawoota sabaa; gurraachaa fi diimaa adiin gargar hiree!
Booranaa – Bareentu gandaan gargar ciree!
Arsii ofi qabee Wallagga abaaree!
Karrayyuu fi Jidda gosaan wali diree!
Bifa takka hinqabu akka gaararraa ti amalli buburree!
Ka’ee nyapha gale of hanqisee saree!
Hubadhaa saba koo gantuu qalbiin darree!
Diinaa – fira hinbeeytu nu cirti mogolee!
Qochumaaf jettee nyaaphaaf taatee golee!
Ijaa – gurra hinqabdu garaa isii malee!
Yaaman hindhageeysu waaqaatu daboolee!
Suuta hindubbattu akka waan dhagoolee!
Kijibaan kakatti ol fuutee sagalee!
Maraatuu hinfayyan ni wyyaawan malee!
Gantuun loon taatee billawaan hinqalluu!
Magaalaa geeysinee qarshiin hindaldalluu!
Akkanaan dandeenyee alaahiis hingalluu!
Diiga goototaa yoo hinbafnee haaluu!
Ormomummaa sobaan of dhaaduun hinmaluu!
Gurmuun tokko taanee; sirna dhablummaa gamtaan haa gilgalluu!
Ijaa nama gartu; udaan nama hindhufuu!
Foon-foon ifii nyaatee, dhala ofii hingaddaafuu!
Diinaaf gurmuu tahee ofi tahee gufuu!
Yaa ilmaan oromoo haa eegannuu saffuu!
Osoo wal arrabsinee; teenyee wal abaarruu!
Dhufaa dabraa mara dhalootaan gabbarruu!
Dhiiga goota keenyaa ka akka Taadee Birruu!
Elemoo Qilxuu fi Buruysoo Boruu!
Nadhii Gammadaa fi jaallan ilkaan kaarruu!
Warra lubbuun dabran; dandii bilisummaa osoo nu taraaruu!
Dagannee hubadhaa dhamsa isaanii faaruu!
Dhiiroo haa yaadannuu akkanaan hinwarruu!
Mee marti of milladhaa; waaqi nu haa maaruu!
Amala waraaboo mee laalaa qalbisaa!
Jiraa fi du’aa maruma ququmsaa!
Kan qeensee dhugu dhiiga obbaleeysaa!
Ilma ayyaa malee kan biraa dhageeysaa?
Rabbi maganfannaa; waaqatti nu dheeysaa!
Kadhadhaa waaqayyo qalbii qulqulleeysaa!
Hamtuu nu fakkeeysee; toltuun nu badhaasaa!
Gurgurataa sabaa haabee dhabamsiisaa!
Dhugaa dubbadhaa hamilee wal tiiysaa!
Diini irree hinqabu numa waliin cabsaa!
Ganda – gandaan dhawee akka lafee warseeysaa!
Birrii fi angoon cubbuu gammachiisaa!
Gosaa fi amantiin dallee wal nyaachisaa!
Albuda nu saamee; lafa oromoo alagaaf moggaasaa!
Hidhaa fi beelaan oromoo gidirsaa!
Mee kutaa kamtu nagayaan elmatee raasee dhadhaa baasa?
Oromoo ergatee waan kijibduu raattuu?
Kan maqaa Booranaa beesharaa tolfattu!
Sabbo moo goonaatu ergate; saba koo na himtuu?
Ilmi oromtichaa booranaa – bareentuu!
Gurgurattuu sabaa maqaan isii gantuu!
Akka saree marattee tan abbaa cinintuu!
Abdataa baasiiree cubbuu hinlagatuu!
Hinjiru WBOn je’ee soba yoo dubbatu!
Jireenya WBO kan habashaan beeytu!
Ilmi oromtichaa xiqqollee hinqanfatuu?
Yoo qoma of dhahee cubbuudhaan kakatu!
Kun waa fayyaa mitii hubadhaa maraatuu!
Jazaan dur ni turti akka kismidaalii!
Tan zamanaa tun akka foon waxallii!
Daftee nama dhaqqabdi xufxufaa irra qaalii!
Onnee dhabanillee soonbaa nama dutaa!
Lammii koo mee laalaa Lichoo fi Abdataa!
Obbaleeyan isaanii badhe diini gataa!
Gumaa baasuu dhiisee WBO quba laataa!
Shakkii hinqabaatiin; yaa lichoo bukraa dhiiyni addaa keetii suma galaafataa!
Nulleen dabarfannee Waaqatti magantaa!
Rabbiin fagoo hinjiruu jazaa ni arkattaa!
Ibiddi Waahiyaannee si gubuuf jiraataa!
Oromoon takkaa Rabbirraa hindhabne dhugaadhaan kadhatee!
Irbuun ati diiyde wa’ada si taatee!
Midhaanii fi bishaan summii sitti gootee!
Dhukkuba biyya hinjirreen afaan si cancaltee!
Sammuu belbelchitee; of si wallaalchiftee!
Dhihotti nu haa garsiisu waaqi nu rahamatee!
Ilmi oromtichaa tokkummaan kadhatee!
Irbuu; irbuu irbuu je’ee gootota yaadatee!
Imimmaan gad roobsee; Odatti haqatee!
Killa bunaa qalee; gurraachaan simatee!
Previous IRREEECHI AYYAANA EENYUUTI? AKKAMITTI EEGALE?
Next Amanamaa wayyanee fii waahila Mallasaa kan ture Dr. Nagaasoo Gidaadaa hidhame jedhu..